Arsenal oo saddexda dhibcood kaga qaadatay Bournemouth Emirates Stadium, Xilli Manchester City dhagta ciida loo daray … +SAWIRRO – Gool FM
(London) 06 Okt 2019. Arsenal ayaa saddexda dhibcood kaga qaadatay Bournemouth Emirates Stadium, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-0 kulan ka tirsanaa kulmada 8-aad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 1-0 ay ku hogaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Arsenal.
Daqiiqadii 9-aad ee bilawoga ciyaarta David Luiz ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Arsenal, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0, kaddib markii uu caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis Nicolas Pepe.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay 1-0 ay guusha ku raacday kooxda Arsenal oo saddexda dhibcood kaga qaadatay Bournemouth garoonka dhaca waqooyiga magaalada London ee Emirates Stadium.
Dhinaca kale kooxda Manchester City ayaa dhagta ciida loo daray kaddib markii loogu awood sheegtay 0-2 a, kulan xiiso badan ay ku wada ciyaareen Wolverhampton Etihad Stadium, waxaana 2-da gool ka dhaliyay Sky Blues xiddiga lagu magacaabo Adama Traore.
Chelsea oo guul raaxo leh kaga soo gaartay Southampton St. Mary's Stadium… +SAWIRRO